Maqaaal:Ma rabtaa inaad jaamacad bilowdo?W/Q Ustaad Oday Cadnaan | SOMALI SUN |
Maqaaal:Ma rabtaa inaad jaamacad bilowdo?W/Q Ustaad Oday Cadnaan
Jul 9, 2017 - Aragtiyood
MA RABTAA IN AAD JAAMACAD BILOWDO?
ISBARBARDHIG KOOBAN OO KU SAABSAN JAAMACADAHA GUDAHA IYO KUWA DIBEDA
Inta badan marka ardaygu soo dhameeyo Dugsiga sare inta uusan nasanba waxaa maskaxdiisa ku soo dhacaya oo uu is weydiinayaa weydiimo la xiriira, ma waddankaaga ayaad wax ku barataa? Mise waxaad aaddaa waddanka dibeddiisa? Waan hubaa tan in ay tahay dhibaato soo wajahda arday badan. Si marka aad u samayso go’aanka saxda, isla markaasna aadan hadhow uga shalaayin waxaa muhiim ah in aad marka hore samayso isbarbardhig ku saabsan faa’idada iyo caqabadaha labada doorasho.
Haddaba waxaan halkan ku samayn doonaa is barbardhig kooban oo ku saabsan jaamacadaha dalka iyo kuwa dibeda:
1. Lacagta jaamacadda (Tuition Fee): inta badan jaamacadaha dalku waxay qiime ahaan ka jaban yihiin kuwa dibada. Tusaale ahaan ardayga wax ku baranaya jaamacad ku taal Soomaaliya waxaa laga yaabaa in qiimaha semester-kii uu yahay qiyaas ahaan $200—300 oo doolar, taas oo la bixiyo.
4 biloodba mar, waxayna bishii noqonaysaa qiyaas ahaan $50—70 doolar. Marka la eego jaamacadaha dibada waxay ka qaalisan yihiin kuwa dalka. Tusaale, waxaan ahay arday wax ka barta University of Nairobi oo ku taal Kenya, semester-kii waxaan bixiyaa $1000 (Kun doolar), waxaa intaas dheer 25% oo dheeraad ah maadaama aanan wadanka u dhalan.
2. Kharashka nolosha (Living Cost): waxaa laga yabaa inta badan markaad wax ku baranayso waddankaaga in aadan ka fakarin waxaad cunto balse markaad tagto waddan kale waxaad bilaabaysaa in aad ka fakarto kharashka nolosha, kaas oo ah mid qiime ahaan sareeya (There is no free launch). Mana jirayso ehel, qaraabo iyo asxaab kale oo aad ku dul-noolaan karto.
3. Dal-tabyo (Homesickness): Faaidooyinka in aad dhulkaaga wax ku barato waxaa ka mid ah in ay kaa ilaaliso dal-tabyo. Tusaale markaad joogtid dhulkaaga ma dareemayso in cid kaa maqan tahay waxaadna diiradda saaraysaa waxbarashadaada balse markaad wax ku baranayso dhul kale waxaa laga yaabaa in aad waqti badan ku lumiso ka fekeridda dadkaagii iyo dalkaagii. Ma fududa in aad markasta gurigiinnii si fudud u soo booqato, lana sheekaysato asxaabtaadii iyo qaraabadaadii.
4. Dal aqoon (Familiar Surrounding): markaad wax ku baranayso dhulkaaga hooyo waxkasta waa kuu fudud yihiin sababtoo ah waxaad sifiican u taqaan dhaqankii, diintii, cuntooyinkii iyo luuqaddii balse way adagtahay in aad la qabsato dhul cusub, kaas oo leh dhaqan, diin, cuntooyin iyo luuqad kale. Waxaaba laga yaabaa in ay kugu qaadato intaad la qabsanayso waqti dheer adna aad haysato waqti kooban. Inta badan arday badan waxaa soo wajaha caqabado badan oo la xiriira deegaanka cusub ee ay yimaadeen taas oo ku keenta in aysan si fiican wax uga fahmin jaamacadda ugu dambayna keenta in ay ku fashilmaan waxbarashadoodii.
5. Fursado shaqo (Job opportunity): Inta badan ardayda wax ku barata dalkooda waxa macquul ah in uu ardaygu helo shaqo marka uu gaaro sanadka labaad ee jaamacadda, isagoo awooda in uu noloshiisa maareeyo, sidoo kalena ka helo waayo-aragnimo balse ardayda wax ku baranaysa jaamacadaha dibedda looma ogola in ay shaqeeyaan taas oo keenaysa in uu ardaygu noloshiisa oo dhan ku xirnaato waalidkiis, isla markaasna wax khibrad ah aysan u kordhin muddada uu jaamacadda dhiganayo.
6. Ma jiro qorshe aad muddo kooban wadanka ugu joogtid, isla markaasna aad ku baranayso luuqad kale. Sidaa darteed, waxaad diirada saaraysaa waxbarashadaaada, meeshii aad baran lahayd erayo cusub. Dhanka kale, waxaad sifiican u taqaan dhaqanka wadanka, mana jiro caqabad xagga dhaqanka ah (Cultural shock).
7. Waxaan shaki ku jirin in aysan fiicnayn tayada jaamacaddaha wadanka marka laga fiiriyo maadooyinka la xiriira caafimaadka iyo Injineerinka sababtoo ah waxaa ka dhiman wax badan oo ku xiran shaybaaro. Sidaa darteed ardayga danaynaya maadooyinkaas way fiican tahay in uu wadamada ku horumaray u aado hadduu awoodo dhaqaale ahaan, balse macne samayn mayso in aad maadooyinkan arrimaha bulshada (Humanities and Social Sciences) u aado wadan kale oo ku bixiso kharash badan
Dabcan, in laga tago dhulkaaga hooyo muddo dheer maahan arrin sahlan. Inta badan sababaha looga tago waayadan dambe waxaa ugu muhiimsan xagga luuqada ingiriisiga. Uma baahnid in aad u aado luuqad wadanka dibediisa. Iyadoo laga duulayo tiknoolajiyada casriga ah, ayaamahan dambe waxaa jira baraamijyo badan oo aad uga baran karto si toos ah adigoo isticmaalaya YouTube-ka.
Bal xisaabi maalinkii iyo habeenki immisa saac ayaad ku lumisaa isticmaalka aaladaha internet-ka. Hal saac oo maalinki ama habeenkii ah hadaad siiso dhagaysiga baraamijyadaas waxaan shaki ku jirin in aad muddo kooban ku baranayso luuqadda adoon safar dheer iyo kharash u gelin.
Intaas waxaa dheer, in aad dibeda wax ku barato malahan wax khibrad ah. Tusaale hadaad baranayso Qaynuunka (Law) iyo Waxbarashada (Education), wax ku barashada dibedu waxay kugu tahay khasaare, sababtoo ah waxay u baahan yihiin in la waafajiyo dhaqankaaga, diintaada iyo xeerarka wadanka u degsan. Sidaa darteed, waxbarashadii dibedu waxay ka hor imanaysaa diinta, qaynuunada iyo dhaqanka dalkaaga hooyo. Dabcan, hadaad rabto in aad macallin ka noqoto luuqadda way fiicantahay in aad waqti kooban waddan kale ku soo qaadato.
Ugu danbeyntii, anoo ka duulaya waaya-aragnimadayda waxaan kula talin lahaa ardayda Soomalaiyeed ee jecel tacliinta sare in ay ku qaataan heerkooda kowaad ee tacliinta sare jaamacaddaha dalka marka laga reebo ardayga danaynaya in uu barto maadooyinka la xiriira Caafimaadka iyo Injineerinka. Marka aad dhamayso jaamacadda heerka kowaad waxaad awoodi kartaa adoo wax badan fahansan, kharash badanna kaaga bixin in aad heerka labaad ee tacliinta sare ku soo diyaariso meesha aad rabto.
“Af Qalaad aqoonta miyaa?
Waa intuu qofba eebbe geshaa”
Abwaan Cali Sugule Cigaal “Dun-Carbeed”
W/Q: Abdukadir Abdirahman Mohamed (CADNAAN)
FG:Warbaahinta somalisun Xaquuqda qoraalkan sibana looguma sooxiririn kaaro,Waayo qoraalkaan waxa uu Gaar u yahay oo Qoraaga Maqaalkan.